प्रहरीको कडा सुरक्षा भएको ठाउँबाटै गाडी कसरी उम्कियो ? १५ किलो सुन काण्ड »
प्रहरीको कडा सुरक्षा भएको ठाउँबाटै गाडी कसरी उम्कियो ? १५ किलो सुन काण्ड
काठमाडौं, २६ साउन। प्रहरीले कमलादीमा सुरक्षा जाँच गरिरहेको थियो। त्यही बेला बा.६च ५५१९ नम्बरको सेतो रङको स्कर्पियो प्रहरीले रोक्न खोज्यो। तर गति बढाएर गाडी भाग्यो। प्रहरीले पिछा गर्‍यो। त्यसको सुइँको पाएपछि कपडाको झोला फ्याँकेर गाडी भागेको प्रहरीले जनाएको थियो।
सुवास गोतामे र उपेन्द्र अर्यालले अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
चलचित्रमा अभिनय गरेको कमाईबाटै काठमाडौंमा दोस्रो घर ठड्याउँदैछिन् पूजा
नेपालमा गएको २४ घण्टामा थप ७४० जना को’रोना सं’क्रमित
अमेरिकाले यस आर्थिक वर्षमा ३० खर्ब डलर बराबरको बजेट ऋणका रुपमा निकासा…